सवारी चालक अनुमति पत्रको नयाँ नियम कहिलेबाट ? « Mero LifeStyle
सवारी चालक अनुमति पत्रको नयाँ नियम कहिलेबाट ?
प्रतिक्षामा ६ लाख परिक्षार्थी
सरिता थारू	|| 25 June, 2021
कोरोना महामारीले गर्दा दुई महिना यता सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा बन्द छ । अनलाइन आवेदन दिएकाहरु लिखित परीक्षा र ट्रायलको पर्खाइमा छन् ।
गत वर्षको लकडाउनपछि ४ महिना अनलाइन फर्म खुलाइएको थियो । त्यतिबेला ६ लाख जनाले फर्म भरेका थिए । उनीहरुले परीक्षा दिन पाएका छैनन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएपछि ट्रायल अथवा लाइसेन्सको लिखित परीक्षा हुन्छ कि भन्ने चासो आममानिसमा बढ्न थालेको छ ।
चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण, प्रतिलिपी, राजस्व संकलन तथा स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धिको कामका लागि ९ असारबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले सेवा सुचारु गरेका छन् । तर, लाइसेन्स परीक्षाको अनलाइन फर्म र ट्रायल कहिले खुल्छ कुनै टुंगो छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नियम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । अब निषेधाज्ञा पछि भने लाइसेन्सको परीक्षा नयाँ नियमबाट लिइने डा. भुसाल बताउँछन् ।
अनलाइन फर्म खुलाएर चाप बढाउनु भन्दा पहिले नै फर्म भरेकालाई लिखित र ट्रायल परीक्षा गराउने तयारी भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक डा. लोकनाथ भुसाल बताउँछन् । ‘अनलाइनको आवेदन कहिलेबाट खुल्छ भन्ने यकिन छैन,’ उनले भने, ‘स्कुल/कलेज सञ्चालन आएपछि मात्रै लिखित र ट्रायलको परीक्षा खुल्छ ।’
नयाँ नियम कहिलेबाट ?
यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नियम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । अब निषेधाज्ञा पछि भने लाइसेन्सको परीक्षा नयाँ नियमबाट लिइने डा. भुसाल बताउँछन् । तर, लिखित परीक्षा दिइसकेकाले भने पुरानै नियमअनुसार ट्रायल दिनुपर्ने छ । ‘लाइसेन्सको लिखित परीक्षा दिइसकेकाहरुले ट्रायलमा १ सय नम्बर नै ल्याउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘अब लिखित परीक्षामा सहभागि हुनेले ट्रायलमा ७० अंकमात्र ल्याए पुग्छ ।
ट्राफिक सङ्केतको पालना नगरेमा १५ अंक कटिने छ । बम्प्स (उभड खाबड) मा एकपटक सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा ५ र एक पटक खुट्टा टेकेमा ५ गरी १० अंक काटिने छ ।
कस्तो छ नयाँ नियम ?
सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षाको लिखित परीक्षाका लागि ५ सय वटा प्रश्न तयार गरिएको छ । जसलाई पहिले नै विभागको वेबसाइटमा राखिने छ । त्यसैबाट २० प्रश्न परीक्षार्थीलाई सोधिने छ ।
ट्रायलमा यी कुरा बिगारे कति नम्बर काटिन्छ
लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिकाअनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड, कार, जिप र डेलिभरी भ्यानको प्रयोगात्मक परीक्षामा घुमाउरो आठ, उभड खाबड (स्पिड ब्रेकर), यु टर्न, ट्राफिक सङ्केत, र्‍याम्प (उकालो), ग्यारेज र परीक्षार्थीको व्यवहारगत पक्षको समग्र मूल्याङ्कन गरी एक सय अंकबाट ७ चरणमा अंक दिइनेछ । जसबाट ७० अंक आएमा उत्तीर्ण गरिनेछ ।
घुमाउरो आठमा एकपटक अंकित रेखा छोएमा ५ अंक र एकपटक खुट्टाले जमिन टेकेमा ५ अंक गरी १० अंक कटिनेछ । युटर्नमा टर्निङ इन्टिकेटर लाइट नबालेमा १० अंक कटिनेछ । ट्राफिक सङ्केतको पालना नगरेमा १५ अंक कटिने छ । बम्प्स (उभड खाबड) मा एकपटक सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा ५ र एक पटक खुट्टा टेकेमा ५ गरी १० अंक काटिने छ । परीक्षार्थीको व्यवहारगत पक्षको समग्र मूल्याङ्कनमा सवारी चलाउनु पूर्व सवारीको ब्रेक, टायर र ऐनाहरूको सामान्य निरीक्षण नगरेमा ३ अंक, हेलमेटको लक नलगाई सवारी चलाएमा ४ अंक र अस्वाभाविक गतिमा वा असंयमित रूपमा सवारी चलाएमा ३ अंक काटिने छ ।
लिखित परीक्षा उत्तिर्ण गर्न ८० नम्बर
लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा परीक्षार्थीले १०० पूर्णाङ्कमा ८० नम्बर ल्याउनुपर्नेछ । जसका लागि विभागले आफ्नो वेबसाइटमा ५ सय वटा प्रश्न सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब यही प्रश्नबाट २० प्रश्न सोधिनेछ । हरेक प्रश्नको अंकभार ५ रहेको छ । त्यसैले परीक्षार्थीले उत्तीर्ण हुनका लागि १६ वटा प्रश्नको उत्तर मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
यी हुन् प्रश्न
लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन खुल्यो, यसरी भर्नुहोस् अनलाइन फारम « Mero LifeStyle
चालक अनुमतिपत्रः सङ्घ र प्रदेशको आ–आफ्नै नियम « Mero LifeStyle
भदौ २० गतेबाट सवारी लाइसेन्सको परीक्षा सुरु हुने, यस्तो छ मापदण्ड « Mero LifeStyle
‘स्मार्ट’ सवारी चालक अनुमति पत्र ‘स्मार्ट’ बन्न नसक्दा सास्ती « Mero LifeStyle
८२ चलचित्र अलपत्र : ‘करोडौं लगानी, बालुवामा पानी’ « Mero LifeStyle